ALT IDX laga bilaabo «Binomo» broker: lacag ka sameynta AltCoin | vfxAlert official blog
ALT IDX laga bilaabo «Binomo» broker: lacag ka sameynta AltCoin
Marka laga hadlayo lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies', dadka intiisa badani waxay ka fekeraan Bitcoin inay tahay lacagta ugu caansan uguna qaalisan ee dhijitaalka ah. Maqaalkani, waxaan ku tusi doonnaa sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada binary iyadoo la adeegsanayo "clones" ama AltCoin .
Isweydaarsiga Cryptocurrency wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood / 7 maalmood, kahor furitaanka ikhtiyaar; waxaan eegaynaa boqolkiiba faa'iidada uu bixiyay dallaalku. Istaraatiijiyad kasta oo maaraynta lacagta ah, waa inay ahaataa ugu yaraan 75-85%, haddii kale, suurtagal noqon mayso in magdhow laga bixiyo calaamadaha binary ee bilaashka ah ee waqtiga la aqbali karo. Nasiib darrose, dilaaliinta badankood waxay bixiyaan boqolkiiba ka hooseeya. Mise si isdaba joog ah ayey isu beddeleysaa iyadoo ballaaran!
Beddelka ayaa noqon kara ALT IDX - synthetic (derivative) hantida cryptocurrency ee Binomo:
Altcoins iyo dhammaan lacagaha loo yaqaan 'crypto-currencies' ee la heli karo oo ay ku jiraan dhammaadka usbuuca iyo ciidaha;
Waxaa loo xisaabiyaa sida celceliska qiimaha afar lacagood: Ethereum, Ripple, Litecoin и Monero. Marka, saadaalinta mala awaalka ah waa “la sifeeyay” waxaana la sameyn karaa saadaalino la isku halleyn karo.
Istaraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u leh tilmaamayaasha caadiga ah
24 saacadood / 7 maalin
Aan ka yarayn 80-90%.
Celcelis ahaan (SMA) Celceliska Dhaqdhaqaaqa oo leh xilli 12. Tilmaamayaasha isbeddellada ee aan ku go'aansano barta furitaanka ikhtiyaarka. Istaraatiijiyadda looma jeedin ganacsiga inta lagu jiro xilliyada guryaha. Waxaan ka ganacsaneynaa oo keliya haddii qiyaasta u dhexeysa ugu yaraan 15-25 dhibcood! Burburku wuxuu noqon doonaa calaamad binary ah oo isbeddel cusub ah. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh!
RSI oo leh muddo 5 iyo heer caadi ah 80/20. Tilmaamayaasha isbeddelka waa in ay daruuri tahay in lagu xaqiijiyo ugu yaraan hal oscillator oo tilmaamaya xad dhaaf ah markii iibsadayaashu aysan mar dambe qiimaha kor u qaadi karin, ama dhaafin karin meesha aysan jirin cid ugu dhow suuqa oo ku iibin karta qiimo hoose.
Stochastic oo leh xuduudaha caadiga ah - oscillator ayaa qiimeyn doona isku dheelitirka hadda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha: saadaaliyaha ka sarreeya heerka 80 - dhammaadka kor u kaca (xad dhaafka ah), ka hooseeya 20 - dhammaadka hoos u dhaca (kor loo qaaday).
Ikhtiyaar CALL . Jaantuska qiimaha wuxuu ka sarreeyaa Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama wuxuu ka jabinayaa xagga hoose, labadaba oscillators-ka ayaa kor loogu jeedaa.
Dooro door . Xaaladaha iska soo horjeedda: qiimaha ayaa ka hooseeya Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama ka jabaya kor ilaa hoose, oscillators-ka ayaa hoos ugu dhaadhaca aagga lagu iibsaday.
Waad furi kartaa xulashooyin si aad uga soo kabato qiimaha Moving Average iyo vfxAlert signal. Kuwa bilowga ah, macaamilkan laguuguma talinayo, waxaa fiican inaad sugto xaqiijinta laba oscillators!
In kasta oo xarfaha waaweyn la barbar dhigo Seeraar, altcoyinnku waa hanti ganacsi oo dhab ah oo kuu oggolaaneysa inaad wax badan kasbato oo joogto ah;
Ugu horreyntii, fiiri dhaqdhaqaaqa Bitcoin. Altcoins-ka badankood way dhaqaaqayaan kadib, xitaa dib u dhac. Marka laga reebo Ethereum waa isbeddelka ka soo horjeedka, dib u celinta iyo saxitaanka. Tani caadi ahaan waa kiiska markii la daabacayo dhacdooyinka muhiimka ah ee ku saabsan lacagta, falalka mala awaalka ahi waa kuwa muddo gaaban soconaya oo aan dhici doonin.
Binomo wuxuu leeyahay sumcad inuu yahay dillaal lagu kalsoonaan karo oo wuxuu siiyaa ganacsade ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah xaaladaha qaar ugu fiican. Ikhtiyaarrada waxaa lagu furay daahitaannada ugu yar, ma jiraan wax dhibaato ah oo laxiriirta macaashka oo ganacsade kastaa wuxuu heli karaa dakhli dheeri ah iyada oo aan loo baahnayn in la beddelo istiraatiijiyadda iyo qaabka ganacsiga.